တရုတ် High Quality 9V T Battery Snap ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - KeYu Plastic
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဘက်ထရီလက်ကိုင်ကိုဖျောက်ပါ
9V T Battery Snap ကိုသုံးပါ
ချိတ်ဆက်ရလွယ်ကူစေရန် snap ဖြင့်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော 9V T Battery Snap ဤ 9V T Battery Snap သည် 9V ပြင်ပဘက်ထရီလိုအပ်သောပစ္စည်းများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသည်။
9V T Battery Snap ၏ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက် ၁
ဤ T ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်လျှပ်တပြက်ကို 9V ဘက်ထရီတစ်ခုနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီသည် ၉.၀ V ဗို့အားကိုထုတ်လွှတ်နိုင်ပြီးမီတာအားကြိုးမဲ့ walkie-walkie၊ ကြိုးမဲ့မိုက်ခရိုဖုန်း၊ ရေဒီယိုစသည်တို့ကိုတိုင်းတာရာတွင်သုံးနိုင်သည်။ 100% ကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ရန်သင့်အားတင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
9V T Battery Snap ၏ 2. Product Parameter (Specification)
အမျိုးအစား T ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်လျှပ်တပြက်
၃။VV T Battery Snap ၏ ၃.၀ ထုတ်ကုန်၏ထူးခြားချက်နှင့်အသုံးချမှု
၁။ ဤ T ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်လျှပ်တပြက်ကို ၉.၀v ဘက်ထရီမှထုတ်ပေးနိုင်သည်
၇။ ကွန်ပျူတာပင်မဘုတ်အဖွဲ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပြင်ပပါဝါအရင်းအမြစ်၊ ကားသော့အတွက် romote ထိန်းချုပ်မှု၊ eletronic အဘိဓာန်၊ ဂဏန်းတွက်စက်စသည်ဖြင့်
9V T Battery Snap ၏ 4. Product Details
အရွယ်အစား: ၂၄.၁*၁၂.၅*၇.၂ မီလီမီတာကြိုး၏အရှည် = ၁၅၀ မီလီမီတာ
၅။VV T Battery Snap ၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး ၅
ISO9001, ROHS, Dun & Bradstreet ထောက်ခံချက်များနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ 9V T Battery Snap အားလုံး
၆။VV T Battery Snap ၏ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် T ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွင်အနှစ် ၂၀ ရှိခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိထိပ်တန်းလုပ်ငန်း ၁၀၀ အတွက်ထောက်ပံ့မှုနှင့်ဖောက်သည်များစွာသည် ၁၀ နှစ်ကျော်ပူးပေါင်းခဲ့ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များသည်အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရုံသာမကဖောက်သည်များအတွက်ထုတ်ကုန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၏ပြဿနာများကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းရန်ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်နမူနာပုံစံများ၊ သင် T ဘက်ထရီကိုင်ဆောင်ထားသည့်လျှပ်တပြက်အတွက်နမူနာများကိုအခမဲ့ရနိုင်သည်။ ကုန်တင်ခအတွက်သာပေးချေပါ။
hot Tags:: 9V T Battery Snap၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ၊ လက်ကား၊ ၀ ယ်သူ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်သူ CE၊ ဖက်ရှင်၊ နောက်ဆုံးပေါ်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်၊ တာရှည်ခံ၊ ထိန်းသိမ်းရလွယ်ကူ၊ နောက်ဆုံးပေါ်ရောင်းချခြင်း၊ အဆင့်မြင့်
9V I Battery Snap ပါ